अनौठो बिरामी: न रुन सक्छिन् न त पानी पिउन नै ! - Everest Dainik - News from Nepal
अनौठो बिरामी: न रुन सक्छिन् न त पानी पिउन नै !
काठमाडौं । ब्रिटेनमा एकजना १९ वर्षीय युवतीलाई अनौठो बिरामी लागेको छ ।
यो बिरामीका कारण उनी सामान्य व्यक्ति जस्तो बाँच्न सकेकी छैनन् ।
डेलि मेलमा प्रकाशित समाचार अनुसार, लिण्डसे कुब्ररे नाम गरेकी युवती अरु जस्तो न त रुन सक्छिन्, न पानीमा भिज्न ।
सुन्दा अनौठा लाग्छ, यी युवतीलाई एक्वाजनिक अर्टकेरिया नाम गरेको बिरामीले सताएको छ ।
यो बिरामीमा पानीबाट एलर्जी हुने गर्दछ । अहिले यो बिरामीबाट संसारमा ५० जना पीडित भएको पत्रिकामा उल्लेख छ ।
पानीबाट एलर्जी भएका कारण दूधबाट बनेका पदार्थको मात्रै प्रयाग गर्न सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
यही बिरामीका कारण लिण्डसे घरबाहिर पनि निस्किन सक्दिनन् । उनलाई कुनै बेला पानी परेर भिजिएमा के होला भनने चिन्ताले सताउने गर्दछ ।
याे पनि पढ्नुस रुसद्वारा २३ ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ देश निकाला
पानीसँग अलिकति सम्पर्क भएपनि उनलाई श्वास फेर्न समस्या हुने गर्दछ । यतिमात्र हाेइन शरीरमा रातो डाबर आउने गर्दछ ।